Norvezy - olom-pantatra sy ny mampihavaka ny Ala sy ny Empiricist - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Norvezy - olom-pantatra sy ny mampihavaka ny Ala sy ny Empiricist
Ao amin'ny faritra atsimon'i ireo Nosy sy ny skerries
Angano momba ny andriamanitra mijanona amin'ny lafiny ilany efa mandroso ny rafitra politikaSoritra ny fisintahana ny vongan-dranomandry sy ny maritrano maoderina ny Oslo hanangona an-jatony maro ireo mpijery.
Amin'ity firenena ity no tsy ho velona amin'ny sampanan-dalana, fahiny sy ho avy, sy ny firindrana ny fomban-drazana sy ny modernity.
Norvezy manintona mpizahatany an-tapitrisa manerana ny tontolo izao lehibe isan-karazany ny asa, ary ny vahiny dia hahita zavatra ho an'ny olona rehetra eto. Rehefa manokatra ny lahatsoratra momba ny Norvezy dia very noho ny motley samihafa ny fampianarana sy ny indrindra nikarakara eo amin'izao tontolo izao tracking, ary mahafinaritra ny jono ary be dia be ny tranom-bakoka ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, tsara ny rafitra ara-dalàna, sy fanasana mba hanao ski resorts sy ny oniversite.
Ao ny Avaratra, tundra sy ny tany lemaka
Fa io fahasamihafana misy ny tena tombony - misafidy ny fitarihan ny sisa sy ny mahazo dia efa vonona lalana. Norvezy ho antsika ity fitsidihana ity dia hanokatra avy amin'ny lafiny natiora. Fjords sy ny riandrano, tendrombohitra ny lalana sy ny tetezana manerana ny renirano - ny tanjona ho an'ny herinandro. Dia mitoetra ihany ny miomana.
Raha toa ianao hanokatra ny sarintany ny Norvezy ao amin'ny Google, ianao dia hahita ny tena elongated, ary tery ny firenena, miravaka amin'ny an'arivony ny lavaka sy ny rakotra angorodao avy amin'ny tandavan-tendrombohitra.
Toa hita fa eto tsy misy olona izay afaka mahita eo an-tendrombohitra sy fjords iray, fara fahakeliny, hektara mba hanorina tanàna? Eny tokoa, amin'ireo tanàn-dehibe rehetra dia hita manamorona ny morontsiraka (ary Oslo mamitsaka ao amin 'ny halalin' ny fjord ny Oslofjord), sy ny tanàna kely - ny shores ny fjords. Na izany aza, Norvezy tsy afaka ny ho antsoina hoe"homogeneous-tendrombohitra". Ary mbola manerana ny firenena, ary avy eo dia afaka"lavo"amin'ny tarehy lohasaha, riandrano, farihy sy renirano. Norvezy sy ny tendrombohitra dia saika mitovy dika, na dia tena aho hitady hafa ny endriky ny. Amin'ny ankapobeny, ao anaty firenena anjakan'ny antsoina hoe"latabatra tendrombohitra"noho ny haavon'ny metatra izy ireo miavaka ny endri-javatra dia efa fisaka - toy ny latabatra - tampony. Izany hoe, mitsangàna ny hahavony, ary tsy misy afaka ho tena iray mba hanorina trano sy miaina eo amin'ny tany lemaka, raha tianao tendrombohitra tundra (hatsikana, izay ny Akoho amam-borona atao).
Fa misy ny"mahazatra"- tendrombohitra izy ireo dia afaka ny ho hita, ohatra, ao amin'ny Jotunheimen.
Noho izany, nanapa-kevitra izahay fa izy dia nandeha tany Norvezy ny natiora, marina? Ka momba ski resorts, ny tranom-bakoka, ny famokarana, ary ny hafa sasany tamin'ny fotoana hafa raha misy dia any, ary te-hiteny. Mamaritra"pop", ny zava-drehetra, anisan'izany isika - te-hijanona faly, araka izay te-ho raiki-pitia amin'ny Norvezy azo nahodina intsony hankamin'andriamanitra sy ny fatratra. Ny Lysefjord dia iray amin'ireo tena manintona ny mpizaha tany ny fjords. Ireto misy roa mahasarika Kjerag, izay rehetra mandeha hijoro amin'ny"Pea"(raha ny marina antsoina hoe Kjeragbolten sy voajanahary mahasarika - be boulder niraikitra teo amin'ny vato, izay samy afaka mifanaraka eo ho eo amin'ny roa, ary ao ny zava-nitranga ny fahalavoana, izay nidina saika ny km). Ary ny faharoa, manintona, Preikestolen, na ny Filazan ny Mpisorona. Tsy manam-paharoa goavana harambato noho ny haavon'ny enimpolo metatra ambonin'ny Lysefjord, ny an-tampony izay no tanteraka fisaka. Na toerana azo nitsidika momba ny diany voalohany, fa zava-dehibe ny mifidy ny fotoana ho toy izany koa Kjerag helo dia lavo teo anoloan ny lalana misokatra rehefa avy ny ririnina, ary tsy ny mandra-mety valo ambin'ny folo. Ny hira-ny fjord - ny lava indrindra ary, araka ny filazan'ny vavolombelona nanatri-maso, ny tsara tarehy indrindra fjord any Norvezy (na ny olona milaza ny anaram-boninahitra ihany koa no voatendry ho amin'ny Geirangerfjord, izay ihany koa ny hevitra tsara ny fitsidihana). Toerana misaintsaina sy ny tarehy, dia ho ankasitrahan'ny tia ny aina ny fandinihana ny hatsaran-tarehy.
Ny Troll ny lela no toerana tena mahasarika ho amin'ny ankehitriny ny mpizaha tany.
Ary tsy mahagaga - ny Teny dia nahazo laza ihany rehefa ny tambajotra sosialy dia lasa somary miely patrana eto an-tany. Hitsangana ho azy - ny fitsapana ho an'ny manam-paharetana sy maharitra.
Ny zava-dehibe indrindra, hoy mpandeha, tsy ho lehibe loatra ny filokana amin'ny tenanao, ary hankafy ry taminy: noho ny toetr'andro toetra ny zavatra afaka dia lavitra mafy ho diso fanantenana sy ho tonga any amin'ny famaranana ny Troll ny Lela no tena overrated.
National parks ao Norvezy - dia misaraka ny lohahevitra mikasika ny resaka, fa hiezaka hanazava fohifohy.
Any Norvezy maro araka fito amby telo-polo maha-tahirin, rehetra sy ny mpizaha tany dia hahita Zaridaina mba hifanaraka ny zavatra mahaliana. Tena mahafinaritra ny mifidy ny iray amin'izy ireo mba hiaina Norvezy. Ny fanazavana fanampiny dia hita ao amin'ny ofisialy ny vavahadin-tserasera ho an'ny mpizaha tany ao amin'ny teny norvejiana. Amin'ny ankapobeny dia manoro hevitra aho fa tadidio ity tranonkala ity: rehefa manapa-kevitra ny drafitry ny lalana mora raisina. Avo roa heny riandrano Lafosse iray tsy mahazatra"lalana"manintona fa mora azo heverina, izay nijanona teo amin'ny lalana. Mankafy, miala sasatra ary handeha eo. Teny an-dalana, mba tsy ho tara afaka mijery hafa tsy mahazatra waterfall teo akaiky teo, Vitfoss, izay mahaliana noho ny"slanted talantalana". Ao Norvezy afaka mandeha amin'ny toerana iray nandritra ny fialan-tsasatra manontolo (ary tsy nanenina momba ny safidy). Noho izany, ny tombony dia milaza aminareo ny momba ny toerana izay tokony handany fotoana bebe kokoa noho ny iray andro - ary izany no tokony hatao mba hahatanteraka ny herinandro. National Park Barangaroo. Amin'ny farany Avaratra ny Norvezy, fa izay ihany ny Barents ranomasina sy ny Svalbard. Ny lehibe tundra amin'ny mandihy eny amin'ny lanitra jiro sy ny biby diera no mivezivezy ao amin'ny fikarohana ny volonkazo. Manakana-karazany ho an'ireo izay tia ny henjana Avaratra toetra kokoa, noho ny fialan-tsasatra eo ambany hazo rofia. Izany no be nosy any Avaratra ny Norvezy, izay mihitsy manolo rehetra ny Norvezy, amin'ny alahady fotsiny ianao dia afaka mahita ny zavatra rehetra ny harena voajanahary ao amin'ny firenena"kely". Afaka mifidy izay lalana sy mahita isan-karazany ny zava-mahagaga, tsy misy raha jerena ny sarintany.
Tena manan-karena ny hatsaran-tarehy ny toerana, izay dia tsy hamela niraika na dia lavitra.
Ny Lofoten Nosy. Toerana iray izay afaka manambatra ny contemplative hijanona ao amin'ireo tanàna kely fohy ny fitsangatsanganana mba tsy hita isa kely sy tsy tena Nosy. Eto ianareo afaka mijery ny trozona sy tsy fahita firy ny vorona. Fa mbola ho tsara ny trondro: ny ankamaroan'ny mpizaha-tany mandeha eto fotsiny izany. Ny Farihy Lovatnet. Dia lovatnet nalaza noho ny rano tsy mampino robina.
Ny olona tonga eto ho amin'ny fandriampahalemana sy firindràm-piarahamonina.
Kayak dia iray amin'ny malaza indrindra ny fizahan-toerana. Manofa trano fialan-tsasatra eo amin'ny farihy na ny lay, hankafy ny sunrises sy ny masoandro mody, mba hirenireny manodidina sy ny milomano ao anatin'ny farihy mety ho tsy manam - dia ho tonga eto nandritra ny herinandro na intsony. Eto dia tena fohy. Tsy mba ho diso fanantenana eo amin'ny diany, ataovy ao an-tsaina ny teny iray: avy ny orana. Tsy ho voafitaky ny tsara tarehy sary nalaina tao amin'ny vanin-taona mafana tsara ny andro. Norvezy dia henjana Tavaratra andro amin'ny hamandoana avo, zavona sy mandrakizay ny oram-panala eo amin'ny tampon-tendrombohitra, ny rivotra sy ny hafanana tafahoatra mandritra ny fiandohana sy fiafaran'ny andro. Vakio bebe kokoa momba ny fomba tsy miscalculate miaraka amin'ny akanjo, ny mandinika ao amin'ny lahatsoratra iray hafa, fa izao fotsiny, ataovy ao an-tsaina: ny ORANA."Ny vidin-javatra any Norvezy manaikitra, tsy ho ny fomba fijery ny laoniny dia tsy azo ekena sy izay rehetra, ny fahatongavan-tsaina ireo Scandinavians?"ny ankamaroany dia afaka mandre izany. Na dia eto izany dia azo atao ny manampy ny maty ny lalana dia avo loatra ary, toy ny ao Eoropa, ny vidin ny tranom-Bakoka ny tapakila. Azonao atao mihitsy aza mijery levitra prices ho anao eto an-toerana ity. Fa, mazava ho azy, raha ny rehetra ny handeha mendrika ny kely vola, isika no tsy maintsy hisintona ny zava-drehetra ao an-trano, ary anatin'izany ny sakafo. Ny tsirairay mifantoka amin'ny ny paosy sy ny isan'ny olona ao amin'ny vondrona.
Танысу тегін онлайн без регистрации
Te-hihaona amin'ny zazavavy ny lahatsary amin'ny chat toerana Mampiaraka mitanjaka ny Fiarahana amin'ny lahatsary amin'ny chat roulette fisoratana anarana ankizivavy amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy plus manambady vehivavy te-hihaona amin'ny chat roulette avy amin'ny finday tsy misy fisoratana anarana sary Mampiaraka fisoratana anarana lahatsary amin'ny chat room video Mampiaraka toerana maimaim-poana